मलेसियाबाट शनिबार २० नेपालीको मृत शव र अस्तु नेपाल फर्काइयो - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मलेसियाबाट शनिबार २० नेपालीको मृत शव र अस्तु नेपाल फर्काइयो
काठमाडौं, २० भदौं ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा गएका २० नेपालीको श,व र अ’स्तुु एकै पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा आइपुगेको छ । त्यसमा आठ जनाको श,व र १२ जनाको अ,स्तुु ल्याइएको हो । नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडीको विमान मार्फत मलेसियामा रोकिएका श,व र अ’स्तुु शनिबार ल्याइएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय मलेसियाले जनाएको छ।
बोर्डका अनुसार को’भिड–१९ पछि मलेसियामा नियमित उडान नभएका कारण रोकिएका श,व एकै पटक सङ्कलन गरेर ल्याउने गरिएको छ । को’भिडका कारण मृ,त्यु हुनेको अ’स्तुु मात्रै ल्याइएको छ भने अन्य कारणले मृ,त्यु भएका श्रमिकको श,व नै ल्याइने गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । विमानस्थलमा आइपुगेका आठवटा श,वमध्ये एक श,व बौद्ध ध’र्म मान्ने भएकाले काठमाडौँको बौद्धमा पु-याइएको छ।
सातवटा श,व शनिबार नै मृ,त’कको घरसम्म पठाइएको छ । विदेशबाट आएका श,वको बोर्डले निःशुल्क घरसम्म पु-याउने गरेको छ । श,वसँगै आएका अ’स्तुु भने सम्बन्धित मृतकका आफन्तले विमानस्थलसम्म आएर बुझ्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । मलेसियामा उडान भर्ने अन्य एयरलाइन्सले श,व नल्याउने र नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी नियमित रूपमा मलेसिया नजाने भएकाले नेपालीको श,व लामो समयसम्म मलेसियामै रहने गरेको जनाइएको छ।
मलेसियाको क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासका तथ्यांकअनुसार गएको महिना अगस्टमा मात्रै मलेसियामा ११२ जना नेपालीको मृ,त्यु भएको छ । त्यसमध्ये ९६ जनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको हो। हृदयाघात, सवारी दुर्घटना, अत्याधिक मदिरा सेवन, शरीरमा जटिल रोगले १६ जना नेपालीको मृत्यु भएको जनाइएको छ।
एकाएक मलेसिया सरकारले गर्‍यो यस्तो घोषणा, मलेसिया ३१ डिसेम्बरसम्म नखुल्ने
क्वलालम्पुर, ६ असोज । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया आउने आप्रवासी श्रमिकलाई कुनै भ्रममा नपर्न...
मलेसिया ३१ डिसेम्बरसम्म नखुल्ने, भ्रममा नपर्न मलेसियाली सरकारको आग्रह !
नेपालीहरु अब मलेसिया जान पाउने यस्तो छ नयाँ प्रक्रिया ?
खुशीको खबर : मलेशिया सरकारले नेपाल लाई लगाएको प्रतिबन्ध खोल्यो ?